प्रधानमन्त्री र विभागिय मन्त्रीबीच लामो रस्साकसीबीच प्रहरी नेतृत्वमा चयन भएका कुवेर सिंह राना संगठनभित्र विवादरहित, कुशल एवम भद्र स्वभाव र व्यवसायिक व्यक्तित्वका रुपमा चिनिन्छन् । ५२ वर्षीय नवनियुक्त महानिरीक्षक रानाको पूर्खाेली थलो बौघा�५ पाल्पा हो । स्नातकसम्मको अध्यन गरेका उनको प्रहरी इन्स्पेक्टरका रुपमा प्रवेश गरेदेखि महानिरीक्षकसम्मको राष्ट्र सेवक यात्राको यो ३५ औं पोष्टिङ हो । उनान्तीस वर्षे जागिरे जिवनमा उनले कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा दोस्रो हुनु परेन ।
प्रहरीको आधारभूत, कमाण्ड, व्यवस्थापन, विकाश प्रशिक्षण, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षादेखि अन्य थुप्रै व्यवसायीक तालिमको ज्ञान हासिल गरेका आईजीपी राना लागू औषध र त्यस सम्वन्धि कानूनका पनि जानकार मानिन्छन् । एक दर्जन जती तक्मा र विभुषणबाट सम्मानित उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरका तालिम, गोष्ठी र सेमीनारमा पनि भाग लिएका छन् । डेढ दर्जन बढी मुलुकको भ्रमण गरेर त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थापन र अपराधिक क्रियाकलाप बारे उनले जानकारी हासिल गरेका छन् ।
२०१७ साउन ६ गते स्वर्गवासी मेजर लीलाविर राना र जोगमाया रानाको कोखबाट जन्मनु भएका महानिरीक्षक रानाका चार दिदीबहिनी, सात दाजुभाई मध्ये पाँचौ हुन् । उनका एक श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् । शब्दवाणले कसैलाई नपिरोल्ने र पिठ्यू पछाडी कसैमाथि कैची नचलाउने स्वभावका राना प्रष्ट, स्पष्ट त छँदैछन्, खरो एवम् पारदर्शी व्यवहार तथा इमानदार छवीले गर्दा उनी प्रहरी संगठनभित्र धेरैको रोजाइँमा पनि पर्न सफल भएका छन् । रुकुम, बागलुङ, भोजपुर, सर्लाही, पर्सा, काठमाडौं, धनुषाजस्ता जिल्ला हाँकेको अनुभव उनीसँग छ भने गण, गुल्म, तालिम केन्द्र रहेर पनि उनले थुप्रै प्रहरी अधिकृत तथा जवानलाई प्रशिक्षीत गराइसकेका छन् । लागू औषध नियन्त्रण तथा कानुन कार्यान्वयन इकाइमा रहँदा उनले स्वदेशी�विदेशी लागू औषधका तस्करको जालो तोड्न पनि सफल भएका थिए । पश्चिम क्षेत्र प्रहरी कार्यालय, पोखरा र महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा प्रमुखका रुपमा रहँदा उनले प्रहरीलाई भ्रष्टाचारबाट अछुतो रहन दिएको कडा निर्देशन प्रशंसनियमात्रै रहेन, प्रहरीले सांगठनिकरुपमै गर्दै आएको आर्थिक अनियमितता तथा घुसखोरीमा निकै कमी आएको छ । प्रहरी नियमावलीअनुसार सेवाअवधि तीस वर्षे नै कायम रहीरहेमा (अवकाश सम्वन्धि मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचराधिन छ) उनले प्रहरी संगठनमा तेह्र महिना मात्रै नेतृत्व गर्ने गर्ने छन् । संगठनभित्र देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न अर्थात् परिवर्तनको छनक देखाउन यो तेह्र महिने अवधि छोटो भए पनि अप्रयाप्त मान्न मिल्दैन । किनकी, उनले महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयको तेह्र महिना नेतृत्व गर्दा ठूलै परिवर्तन ल्याइदिएका छन् । यद्यपि, आफू स्वयम् महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहेकाले कतिपय विषयमा मौन रहनु परेको बाध्यात्मक अवस्था पनि रानालाई परेको थियो होला । तर, अब त्यस्तो अवस्था छैन । र, उनले सरकारले आफूमाथि गरेको भरोसा, विश्वासलाई प्रतिवद्धताका साथ निर्वाह गर्दै प्रहरी संगठनलाई समयानुकुल व्यवसायीकतातर्फ ढाल्नु पर्ने चुनौतीको सामना गर्नुका साथै संगठनका सदस्यको गिर्दाे मनोबल उकास्न पनि उल्लेखनिय भूमिका खेल्नु पर्नेछ । प्रहरी संगठनलाई गतिशिल नेतृत्व दिएर परिवर्तनकारी सुधारात्मक संकेत देखाएको खण्डमा प्रहरीका थुप्रै पूर्व महानिरीक्षकहरुले अवकाशपूर्ण जिवन व्यथित गरेजस्तो उनले आगामी तेह्र महिनापछि पनि राष्ट्र सेवकको भूमिकाबाट अलग हुनु पर्ने छैन । किनकी, मुलुकलाई देश र जनताको सेवा गर्ने सेवकको ठूलो खाँचो छ । कुर्सी ओगटेर स्वार्थलाभ लिनेहरु भनेका खहरेखोला जस्तै कहिले उर्लीन्छन्, कहिले सुक्छन् भन्ने महानिरीक्षक रानाले आत्मसाथ गर्नु पर्छ ।
यहीबीच पत्रकार मधु लम्सालसँग महानिरीक्षक रानाले छोटो कुराकानी गर्नु भएको छ ।
�बोलेर होइन गरेरै देखिउँछु�
त्यो त प्रतिस्पर्धीहरु भएपछि छनोट प्रक्रियामा दावी हुनु स्वभाविकै हो । त्यसलाई मैले अनौठोरुपमा लिन्न । ० तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीले च्यापे, गृहमन्त्रीसँग त सम्वन्ध केही चिसो हुन्छ कि ? होइन, त्यस्तो केही पनि हुन्न । म एक कर्तब्यनिष्ट राष्ट्रसेवक हुँ । मैले व्यक्तिको होइन, सरकारको आदेश पालन गर्ने हो । यसै पनि म गैराराजनीतिक पहिचान भएको व्यक्ति हुँ । म प्रहरी सेवामा रहेसम्म राजनीतिबाट अलग्गै रहन्छु । त्यो व्यवहारमा गरेरै पनि देखाउँछु । रह्यो, गृहमन्त्री ज्यूसँग मेरो सम्वन्धको कुरा । उहाँले नै मेरो बढुवाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु भएको हो भनेपछि आफ्नो विभागिय मन्त्री ज्यूसँग कस्तो सम्वन्ध मैले बनाउनु पर्छ भन्ने यसै स्पष्ट छैन र ? मैले जहिल्यै नीति र कानुनको पालना गरेँ, गर्दै आएको छु र भविष्यमा पनि त्यसलाई पछ्याइरहने छु । मलाई सरकारले देश र जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, आम जनताले ममाथि ठूलो भरोसा पनि गरेका होलान्, त्यो म प्रतिवद्धताका साथ इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दीन । मेरो कसैसँग आग्रह र पूर्वाग्रह रहने छैन । ० जो पनि महानिरीक्षकमा नियुक्त हुँदा आश्वासनका लड्डु बाँड्छन् तर, संगठनको सुधारमा होइन, भूँडीसुधार्नेतिर लागेको देखियो । तपाईंका पनि भावी कार्ययोजना त होलान नि ? अरुका सन्दर्भमा मैले बोल्नु भन्दा पनि मेरै लक्ष्यको बारेमा प्रष्ट पार्छु । मैले बोलीले होइन, व्यवहारले नै गरेर देखाउँछु । त्यो तपाईंहरुले देख्दै जानु हुनेछ । तपाईंले भन्न खोजेको आशयजस्तो प्रहरीमाथि लाग्दै आएको आर्थिक बद्मासीको अन्त्यका लागि म खुलेरै उभिन्छु । प्रहरी भनेको जनताको सेवा गर्ने पवित्र संगठन हो, यो कुनै व्यापारिक या व्यवसाय गर्ने नाफामुखी संस्था होइन । त्यसैले जनताका गुनासा सुन्ने, उनीहरुका इच्छित सेवा प्रति प्रहरी संगठनले सकेसम्म पूरा गर्ने गराउनेतर्फ संगठन प्रमुखको हैसियतले मैले लक्ष्य नै बनाएको छु । मेरा पनि केही कार्य योजना पक्कै पनि छन्, ति छिट्टै सार्वजनिक गर्ने मात्र होइन, तपाईंहरुले स्पष्टसँग देख्ने गरी कार्यगत व्यवहारमै लागू गराउने छु । यो मेरो प्रतिवद्धता हो ।
संगठनको नेतृत्वकर्ता एक जना मात्र हुने र त्यसमा अहिले हामी तीन जनाको दाबी रहेकोले बाहिरबाट बुझ्नेहरुका लागि विवादजस्तो देखिएको हो । हामीबीच विगतमै जस्तो न्यानो एवम् भावनात्मक मित्रता कामय छ, र त्यो भविष्यसम्मै रहिरहने छ भन्ने मेरो बुझाई छ । मैले आफ्ना सहकर्मीसँग सहकार्य गरेरै एक ढिक्का भएर प्रहरी संगठनलाई व्यवसायिकीकरणतर्फ अगाडी बढाउन पहल गर्नेछु । यदि उहाँहरुमा त्यस्तो तिक्तता छ भने त्यो मेटाउन मैले नै पहल गर्छु । र, संगठनलाई राजनीतिबाट पनि टाढा राखेर जनविश्वास आर्जन गर्ने तर्फ मेरो विशेष ध्यान केन्द्रीत हुनेछ । नागरिक बिना बर्दीका प्रहरी र प्रहरी बर्दीधारी नागरिक हुन् भन्ने मान्यताको अनुशरण गराउन मेरो विशेष जोड रहने छ । संगठनभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पनि व्यवसायीकता र कार्यक्षमतालाई प्रमुख आधार बनाएर प्रहरीको मनोबल बढ्ने तथा आचारणमा शुद्धता ल्याउने नीतिलाई पारदर्शीताका साथ अघि बढाउने छु ।
० नयाँ महानिरीक्षकका हैसियतले जनतालाई के भन्नु हुन्छ ?
जनताको शान्ति सुरक्षा नै प्रहरीको मुल कर्तब्य भएकाले शान्ति सुरक्षाको पहरेदार �नेपाल प्रहरी�को प्रमुखका हैसियतले म जनतासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने विश्वास दिलाउँछु । प्रहरी सेवालाई सहज, पारदर्शी र दबाबरहित तुल्याउँदै आमजनताको पहुँचमा पु�याउन अग्रसर रहने प्रतिवद्धता जनाउँदछु । साथसाथै, चाकडी प्रथाको अन्त्य गराउन अभियान नै थाल्छु । ० संगठनका सदस्यको मनोवल उकास्नेतर्फ के सोच्नु भएको छ ?
२, पेसागत व्यवसायिकता प्रवद्र्धन गर्ने
६, जवाफदेही बनी मानवअधिकार संरक्षण गर्ने
७, संस्थागत सुदृढीकरण, भौतिक संरचना, पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिने
८, प्रहरीको सरुवाबढुवा नियमसंगत र पारदर्शी बनाउने
Posted on:September 14, 2012, 8:21 am